Inona ary ny fomba fanaovana tabilao Gantt ho an'ny fifanarahana | Famoronana an-tserasera
Ny tabilao Gantt, izay mazàna tsy dia noforonina firy, dia mety ho fialan-tsiny tsara hitrandrahana ny fahaizantsika mamorona
La Tabilao Gantt Tsy inona izany fa ny fandaharam-potoana hita maso izay ahafahanao mahafantatra haingana ny fandehan'ny fotoan'ny tetikasa manokana. Ity dia karazana infographic izay manome antsipiriany sy manapaka ny hetsika rehetra mifandraika amin'ny tetikasa ankapobeny, mifandraika amin'ny daty nanombohany sy ny fiafarany
Ity antontan-taratasy ity dia hahafahan'ny client sy ny matihanina (izay mety ho mpamorona endrika) hahafantatra izany ora fanaterana notondroin'ny priori. Raha tsy hainao ny manao tabilao Gantt na mbola tsy nahita iray dia vakio.
1 Ahoana ny fomba hanaovana tabilao Gantt
1.1 Dingana voalohany: inona ny teny tokony ampidirina
Ahoana ny fomba hanaovana tabilao Gantt
Matetika izy io dia atao ao Excel mba hahamora ny fiasa miaraka amin'ny sela ary hahafahana mameno loko haingana. Fa aleo hazava: Tsy mpamorona ve isika? Andao hamolavola. Andao tsy hianjera amin'ireo estetika tsy mendrika sy mahantra izay mazàna manjaka amin'ny rakitra Excel, ary andao hiezaka ny hametraka sary an-tsaina ny tabilao Gantt. Azontsika atao ny mieritreritra ny volavola izay hampiasaintsika amin'ny hafa rehetra tokony hataontsika, ary amin'izany dia ampiasainay ho modely amin'ny asantsika rehetra. Andao hieritreritra fa ny antontan-taratasy tsirairay natolotra / noforonina dia tokony hanompo taratasy ny serivisintsika: andao hanao izay tsara indrindra vitantsika, andao hamolavola.
Dingana voalohany: inona ny teny tokony ampidirina
Araka ny efa miharihary, arakaraka ny tetikasa hovolavolaina dia mila fepetra iray na rafitra hafa fandaminana isika. Izay ho iraisan'ny tabilao Gantt rehetra dia ho Ny fandaharam-potoana: amin'ny ankapobeny, volana sy herinandro no voalaza. Mba ho mazava kokoa kokoa aza, ary raha tena azontsika antoka ny andro hamaranantsika ny hetsika tsirairay, dia azontsika atao koa ny mampiditra ireo andro.
Manoloana ny vanim-potoana isika dia tsy maintsy mametraka ny hetsika hampivelatra. Raha ao anatin'ny ekipa matihanina isika dia azontsika atao ny manondro ny anaran'iza no hikarakara azy tsirairay. Azontsika atao koa ny mampiditra ny andro fiasana mety hahavitantsika an'ity asa ity.
Ataovy marina izany Amin'ny fetr'andro farany, aza mitady hampifaly ny mpanjifa. Ny fotoana horaisin'ny asa iray dia hofaritana amin'ny enta-mavesatra anananao koa ao anatin'io fe-potoana io, aza hadino izany.
Andininy sy manadio hatramin'ny farany ambony ny fizotrany, ny hetsika tsirairay. Fividianana vokatra, sketsa, fankatoavana ary fanitsiana ny mpanjifa ...
Ny tabilao Gantt dia manazava antsika sy ny mpanjifa ny fe-potoana farany hahavitana sy handefasana azy. Ny fandaniam-bola ataontsika raha mifanaraka amin'ny zavatra napetratsika ao aminy no hilazana amintsika hoe tsara (na ratsy) izany. mandamina ny fotoanantsika isika. Tadidio fa nanoratra lahatsoratra momba izany isika programa izay hanampy anao hitantana ny fotoanao.
Fanazavana fanampiny - Fe-potoana: nofy ratsy noforonin'ny mpamorona sary, Fandaharana 3 hitantanana ny fotoananao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inona ary ny fomba fanaovana tabilao Gantt hampidirina ao amin'ny fifanarahana nataonao